नेपाल बैंकको खराब कर्जा डरलाग्दो - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com नेपाल बैंकको खराब कर्जा डरलाग्दो - Aathikbazarnews.com
सीइओ अधिकारीको नालायकीपन
आफूलाई पूर्व एमाले कार्यकर्ता भन्न रुचाउने नेपाल बैंकका सीइओ कृष्ण अधिकारीको नालायकीपनले नेपालको सबैभन्दा पूरानो सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड डुब्न लागेको छ भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।
बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीको सोझोपनलाई फाइदा लिँदै सीइओ अधिकारीले बैंकमा लुट मच्चाएका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने काम बैंकका सीइओबाटै हुन्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो पनि सत्य हो ।
नेपाल बैंक सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । यस बैंकमा लाखौ लाख ग्राहकहरुको पैसा छ । पचासौ वर्षदेखि लकर छन् । त्यस भित्र के छ ? कसैलाई थाहा छैन । कतिजना त लकरको सेवा लिने मरिसके । अहिले सत्ता र शक्तिको फूर्ति दिँदै सीइओ अधिकारीले बैंकका लकर खोल्न राष्ट्र बैंक र सम्बन्धीत मन्त्रालयमा सहमतीका लागि पत्राचार गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । रातारात जनताको लकर फुटाउने र लुट मच्चाउने सीइओ एवं एमाले कार्यकर्ता अधिकारीको कथा मिठो छ । तत्कालीन एमालेका एक नेतालाई करिब ५ करोड बुझाएर नेपाल बैंक जस्तो पूरानो बैंकको सीइओ बन्न सफल अधिकारीले बैंक भित्र भाँडभैलो मच्चाएको भेटिएको छ ।
बैंकका एक सञ्चालकले भनेः– आफ्नालाई कर्जा प्रवाह देखि कम्यूनिष्टका अनलाईन र पत्रपत्रिकामा एजेन्सी मार्फत कमिशन लिई नेपाली जनताको रगत र पसिनाको पैसा माथी सीइओ अधिकारीले लुट मच्चाएको भेटिएको छ । यति सम्मकी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्दा समेत एक विज्ञापन एजेन्सी मार्फत कमिशन लिने गरेको खुलेको छ ।
अब बैंकको वित्तिय विवरण भित्रको खराब कर्जाको कुरा गरौं । आजभन्दा १५/२० वर्ष अगाडी बैंक राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी सुधार गरेपछि काँचुली फेरीएको बैंक हो । नेपाल बैंक विदेशबाट बैंकर ल्याएर सुधार गरेको बैंकमा अहिले करिब ३ प्रतिशत खराब कर्जा देखिएको छ । बैंक स्रोत भन्दछः– सीइओ अधिकारीले कर्जा उठाउन भन्दा पनि सेलिब्रेटी बन्दै सञ्चारमाध्यामा फोटो छपाउने होडवाजीमा लागेका छन् । मोटो जनताको पैसा खर्च गरेर विभिन्न पत्रपत्रिका अनलाईन र सरकारी सञ्चारमाध्याम राससमा अन्र्तवार्ता लिएर बैंक राम्रो भएको धक्कु लगाउते हिँडेको देखिन्छ । तर, बैंकको खराब कर्जा करिब ३ प्रतिशत देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत भन्दा बढि खराब कर्जा भएको बैंकमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ । त्यसकार ठूला डिपोजिटकर्ता र शेयरधनीहरुको प्रतिफल नेपाल बैंकमा सुरक्षित देखिदैन । लगानीकर्ताहरुको र डिपोजिटकर्ताहरुको पैसा डुब्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
पंक्तिकारले यसबारेमा राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी सिवाकोटीलाई प्रश्न गर्दा उनीले भनेः– सबै तीन वटै सरकारी लगानी भएका बैंकमा खराब कर्जा उच्च नै छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा हामीले घटाउन निर्देशन नै जारी गरेको अवस्था हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो भयो तर अरु २ वटा बैंकको सुधार भएको देखिदैन । उनीले थपेः– हामी सुश्मरुपमा अध्ययन गदैछौं नि ।
सीइओ छन् नै अयोग्य व्यक्ति । सीइओ भएपछि नेपाल बैंक अब सुध्रिने देखिदैन । अधिकारी जस्ता अपरिपक्क व्यक्तिलाई सीइओ बनाएको भन्दै ठूला लगानीकर्ता र डिपोजिटकर्ताले चित्त दुखाएका मात्रै छैनन् । डिपोजिट फिर्ता लैजाने भएका छन् ।
नेपाल बैंकका अध्यक्ष्ँ बासुदेव अधिकारीलाई प्रश्न गर्दा उनीले भनेः– बैंक बनाउने कामको मुख्य जिम्मेवारी सीइओको हो । हामीले निर्देशन दिने र हेरविचार गर्ने हो नि ।
उनीकै भनाई सापटी लिने हो भने बैंक बनाउने सीइओ सेलिब्रेटी बन्दै पत्रिकामा फाटो छपाउने अन्र्तवार्ता दिने होइन । बैंक भित्र बसेर पोलिसी बनाउने र बैंकलाई उच्च खराब कर्जाको जोखिमबाट बचाउने हो कि कसो गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपालज्यू ? सचेत भया ।